ko htike's prosaic collection: နေဘုန်းလတ် ပေးဆပ်မှုအတွက် မှေးမှိန်ခြင်း မရှိစေရ
Posted by ကိုထိုက် at 04:11
ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ဟို ကုလားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာက တမှောင့်
မလေးမှာလည်း မြန်မာမတွေအများကြီး ရတဲ့ငွေနဲ့ မလောက်လို့ပြည့်တန်ဆာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတာ။
true guys! i am speechless, angry and dont know what to do now.
but ONE DAY THEY ALL MUST GET WHAT THEY DESERVE!
one word REVENGE!!
နေဘုန်းလတ်ကို စစ်အကြမ်းဖက်သမားတွေက ထောင်ဒဏ်၂၀ဆိုတာချပြီးကမ္ဘာက သိအောင်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။
နေဘုန်းလတ်ကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ နေဘုန်းလတ်တွေအများကြီး လည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါပြီ။
ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုနေဘုန်းလတ် ခင်ဗျာ....
Laeh' Laeh' said...
ကိုထိုက်ကိုယ်တိုင်ယိုးဒယားနယ်စပ်သို့သွားရောက်ပြီး ABSDF ကဲ့သို့အဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းကာ မြန်မာအစိုးရအားတိုက်ပွဲဝင်သင့်နေသည်မှာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း
Try to kill leaders who are on trip in oversea countries.
It is the best way to fight them back.
i really doesnt know how to describe them man.....the junta juz destory their life.we should do sumthin for them likeaprotest.
i had one idea,i tink all the nld should break ain sein prison and go inside and get arrest,they dont haveaplace for alot of ppl but all ppl must be unite!
that idea is given by one of the politician
ခွေးတွေကတော. တွေ.သမျှ လိုက်ကိုက် နေမှာ ဘဲ....
အဲဒီ ခွေးတွေ ဒီအတိုင်း လွှတ်ထားရင် တော. ဒီအတိုင်းဖြစ်နေမှာဘဲ....
ခွေးသရမ်း....ကို မရှင်းသရ်ျတော. ဒီလိုဖြစ်နေအုံးမှာဘဲ....
သေမထူးနေမထူးဖြစ်နေတဲ...ပြည်သူတွေနဲ......ငတ်ပြီးသေတော.မဲ.ပြည်သူတွေ အားလုံး နအဖ စစ်ခွေးတွေ ကိုသုတ်သင်ဘို. အချိန်တန်ပါပြီ...
ROHINGYA BLOGGER said...
(1)bkef;}uD;awGudkowf/axmifcs - bmoma&;udkaqmfum;/
(3)wdkif;&if;om;rsm;tm;trsKd; rsKd;eSdyfpuf/bmoma&;t& aqmfum;/
aemufeSpfaygif;b,favmufapmifhae}urSmvJ/ “ oifykef;acs” qdkjyD;ajymae}urSmvm;?
(4) vufyg;ap “&0w”tzGJ@0ifrsm;/ udkpjyD; tjrpfutpacsrSKef;ypf&r,f/tom;xJu
သန်းရွှေ စစ်အုပ်စု က ဘလော့ဂါ လူငယ်လေး တစ်ယောက်ကို အနှစ် ၂၀ ထောင်ချတာ သက်သက်မဲ့ စောက်ကျင့်ယုတ်တာပါ။ လူတွေ အားလုံးသိပါတယ်။ စစ်အုပ်စု အကြောက်ကြီး အကြောက်လွန်ပြီး ဖမ်းထားတဲ့ ဘလော့ဂါကို စံပြဖြစ်အောင် နှစ်ကြီး ထောင်ချတာ အညွန့်ချိုးပြလိုက်တာပါ။ နေဘုန်းလတ် တယောက်ထဲ အပေါ် မတရားလုပ်နေတာ မှ မဟုတ်ပဲ။ မတရားမှုတွေ တိုင်းပြည်ထဲမှာ အနှံအပြား ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာလှပြီပဲ။ လူတိုင်းနီးပါး ခံစါး နေကြရတာ။ ဒီကိစ္စ မမှေးမှိန်သွားပါဘူး ကိုထိုက်။ ကိုမင်းဒင်ရေးပြတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်လာမှာပါ။ မစင်တွေ ရွှံ့ ပေနေတဲ့ ဝက်က သူ့ ကိုယ်လုံးနဲ့ ပတ္တမြားတုံးကို ပွတ်သလို ပွတ်လေပြောင်လေ လို့ သာ ဆိုချင်သဗျာ။
နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ သို့မဟုတ် ၆၅ နှစ် ကြာတဲ့ အထိ သန်းရွှေ စစ်အုပ်စု အာဏာကို အခုလို ကိုင်ထားနိုင်မလား။ အပြောင်းအလဲဆိုတာ ရှိလာဦးမှာပါ ကိုထိုက်။ ကိုထိုက် စီမံ ဆော်သြ သင့်တာက အဖမ်းဆီးခံနေရသူတွေ ကို ထောက်ပံဘို့ သူတို့မိသားစုတွေကို ဆက်သွယ်ထောက်ပံ ဘို့ပါ။ တယောက်ယောက်က မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ ဦးဆောင် ပြီး လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ရင် အားလုံးက ပါလာကြမှာ။ နိုင်ငံခြားက မြန်မာ တွေ တယောက် ၅ ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာ စီ စုပြီး တခုခု စလုပ်ကြဘို့ သင့်ပါပြီ။ လူသိများပြီး သမာသမတ်ရှိသူ တဦး ကသာ စကြည့်ပါ။ အားလုံးက အားတက်သရော ကူညီကြမှာပါ။ မှန်မှန် ကန်ကန် လုပ်ပြဘို့တော့ လိုသပေါ့။
လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ နအဖဒေါက်တိုင် သံရုံးINFORMER တွေကိုရှင်းကြမလား၊ အတိအကျရှိတယ် ကိုထိုက်
Ko Htike, What if we acknowledge or makeanote of the day over '60' political activists were sentenced for prison asa"memorable day"....And we should do demonstrations in "Killer's Embassy"
ကိုနေဘုန်းလတ် အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ စကားနဲ့ တင်မလုံလောက်မှန်းသိပါတယ် ဒါပေမယ့် ကျမ တို့နဲ့အသက်ချင်းမတိမ်းမယိမ်းလူငယ်တစ်ယောက် ဘ၀ နစ်မွန်းသွားတဲ့အတွက်တော့ရော တရား တဲ့အမှုတွေ ဆိုတာ ကျမ တို့နိုင်ငံမှာ မရှိသလောက်ပါဘဲ။
ကျမ အယူသီးသူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ဆရာကြီး ဦးဝင်တင် က အထွက် ကိုနေဘုန်းလတ်က အ၀င် ဆိုတော့ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် နေရာ ကို ဆက်ခံလိုက်သလို ဖြစ်သွားသလားလို့။ ကိုနေဘုန်းလတ်က ဆရာကြီးဦးဝင်းတင် လို ၀ါရင့် ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ဘလောခ်နေရာမှာရော လူငယ် တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀ခြေလှမ်းတစ်ချို့မှာပါ အထိုက်အလျောက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လှုပ်ရှားသွားတဲ့လူငယ်တစ်ဦးပါ။
ကိုနေဘုန်းလတ်လို လူငယ်တစ်ဦးကို ထောင်ထဲ ထဲလိုက်လို့ ကျန်တဲ့လူငယ်တွေ တော့ နိုင်ငံရေ ဘလောခ်တွေ လျော့ကျသွားမယ်လို့ လက် ရှိန်သတ်လို့ ကြောက်သွားလိမ့်မယ် လို့ နအဖ က ယူဆ ကောင်းယူဆပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ ယူဆချက်က မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ် ။သို့သော် ကိုနေဘုန်းလတ်ထောင်ထဲကို မတရားသဖြင့် အနှစ်၂၀ချမှတ်လိုက်ခြင်းဟာ လူငယ် အယောက် ၂၀ထက် မကတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ "ဒါက မတရားမှု ကြီး " အာဏာနဲ့ ဥပဒေကို ပါစပ်ထဲမှာဆွဲပြီး ပါစပ်လေးနဲ့ ထောင်ချသွားလိုက်တာ အနှစ်၂၀တဲ့ သူတို့ အတွက်တော့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ပေါ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ အနာဂတ် ကို သူတို့ ပါစပ်ထဲကို ထိုးကျွေးလိုက်ရပါတယ်...
အခုလို ကိုနေဘုန်းလတ် ထောင်အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည် ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလို့ဘဲ ကျမ အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။
ကျမတို့ နိုင်ငံ၇ဲ့ ၈၈ အရေးအခင်းသမိုင်းကို ကြည့်ရင်လည်း ကိုဘုန်းမော် တစ်ယောက်က ၈၈အရေးအခင်းအတွက် ရင် နှီးမြှုပ်နှံသွားခဲ့ဘူးတာကို ကျမ အမှတ်ရလိုက်မိပါသေးတယ်
- keep record of when, where, who, whom and why he was charged and make memory day for him
- support his family morally and financially ( let his family know we support him, signed group letter and send them etc. )
- I think this case has made more of him than less of him. This is plain unjust and people will talk more about him. Hurt them more than scare them. Which they intended to scare people as an example. So, please talk more and put him larger than life. I can see the affect are coming and more than they could handle. They choose to face angry and hungry people, how stupid of them.
- Help fellow bloggers in technology and how to prevent from being hacked
- put his story in your blog and talk about it. Open up discussion which you have done here.
- Write your objection/comment to Burmese embassies, organizations who help political prisoners etc.
- Setup fund to help people who have been unfairly treated by the junta
- Don't let them get away with forgetting what they have done. They must pay back someday. Their time will come.
13 November 2008 at 17:47
It is about time to start assassination (from branches to stem)
Like playing chess, you can't go straight to the king. You have to start from pawn. Like beginning from judges that involved.
မတရားသူကြီးတွေရဲ့ နာမည်၊ နေရပ်၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ စုံစမ်းပြီး ကိုထိုက်ဘလော့ဂ်မှာ ဖော်ပြပေးပါ။
ကိုထိုက်လုပ်ချင်တာကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။
အဓိကကတော့ ကိုထိုက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘလော့ဂ်ဂါများအနေနဲ့ နောက်ကနေ ထောက်ခံနေကြောင်းနှင့် နေဘုန်းလတ်လိုလူမျိုး နောက်ထပ် ထပ်ပေါ်လာဖို့အတွက် စည်းရုံးဖို့နဲ့ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားကြဖို့ နှိုးဆော်စာမျိုးကို ဘလော့ဂ်တိုင်းမှာ တရားဝင်ကြေညာခြင်းမျိုးက နေဘုန်းလတ်ကို ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ သူ့လုပ်ခဲ့တာမျိုးကို နောက်ထပ်လူတွေက ဆက်လက်လုပ်နေကြောင်း အားပေးခြင်းက သူ့အတွက် ထောင်တွင်းမှာနေရပေမယ့် ငါ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးကို ငါ့ညီနောင်တွေ ဆက်လုပ်နေပါ လားဆိုတဲ့အသိမျိုး ပေးလိုက်ခြင်းက ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါမှလဲ သူပေးလိုက်ရတဲ့ အရင်းအနှီးက တန်တယ်ဆိုတာမျိုး လုပ်ပေးနိုင်တာက ပိုကောင်းမယ့်အစီအစဉ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ချင်မှလဲ ဟုတ်မယ်။ ထင်တာကို ရေးသားထားခြင်းပါ။
Asayouth, so sorry for his youth life. We can't make peace with those regime. We got to fight back like Hero General Aung San. We can do some punishment to All Judges, solicitors, polices, soldiers, etc people who support regime. Like I do, I never speak nor support financially to my relatives who are soldiers, who married to soldiers. I would want to change my own blood if I could cos I feel ashame of being related to those guys. If we can isolate them out of Burmese community!! inside Burma or outside Burma
တာလေးပြောပါရစေ။ domain တစ်ခုလောက်
ယူပြီးတော့ အီးမေးလ် လေးတွေလုပ်ရင်ကောင်း
မလားလို့ပါ။ ဥပမာ- user@nayphonelatt.com
နိုင်တာပေါ့။ ဘလော့ဂါသူရဲကောင်းကို ဒီထက်